एक ज्ञानको आधार अनुच्छेद कसरी अनुकूलित गर्ने Martech Zone
कसरी एक ज्ञान को आधार लेख अनुकूलन
आइतवार, मार्च १,, २०१। बिहीबार, जुन 29, 2017 Douglas Karr
जबकि एक लेख वा ब्लग पोष्ट एक छोटो कथा को रूप मा प्रवाह हुन सक्छ, जानकारी खोज्ने आगन्तुकहरु त्यो जानकारी एक सुसंगत ढाँचामा अनुकूलित देख्न मन पराउँछन्। लेखको पाठकले प्रत्येक शब्द, प्रत्येक रेखा, र प्रत्येक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ्न सक्छ। जे होस्, ज्ञानको खोजी गर्ने आगन्तुकले पृष्ठ छिटो स्क्यान गर्न र उनीहरूले खोज्न को लागी गरेको जानकारीको बारेमा सीधै जान खोज्न सक्छन् र अधिक जान्नको लागि।
हत्यारा ज्ञानको आधार बनाउने सेक्सी नहुन सक्छ, तर यसले तपाईंको भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरूलाई तपाईंको उत्पादनबाट अधिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने दिशामा लामो यात्रा गर्नेछ। र अधिक मूल्य तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु दिन, अधिक संभावना तिनीहरू फिर्ता ग्राहकहरू हुनेछन्। कोलिन न्यूकमर, हीरोमिस
कोलिन न्यूकमरले एक राम्रो लेख सँगै राखेका छन्, यो परम ज्ञान बेस लेख टेम्पलेटतल इन्फोग्राफिकको साथ। म शीर्षकमा अलिकति स्पिन लिन चाहन्छु र पाठकहरू र खोज इञ्जिन दुबैलाई आकर्षित गर्न तपाईं कसरी आफ्नो ज्ञानको आधार लेखलाई उत्तमतम बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ मेरो सल्लाहहरू कोलिनको साथ पigned्क्तिबद्ध छन्:
शीर्षक - खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरू प्रायः वास्तविक प्रश्नहरूको प्रयोग गर्छन् जस्तै कसरी, के हो, आदि। म इन्फोग्राफिकमा कोलिन शीर्षक अनुकूलित हुनेछ कसरी प्रभावकारी ज्ञान आधार लेख लेख्न.
स्लग - धेरै सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीले यस्तै शब्दहरू हटाउँछन् लाई or is। तपाइँ तपाइँको लेख permalink स्लग मा राख्न चाहानुहुन्छ ताकि खोजहरु निकटसँग मिल्नेछ। यसले खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठबाट क्लिक-थोरै दरहरू वृद्धि गर्दछ।
समस्याको साथ सुरू गर्नुहोस् - समस्याको साथ सुरुसँगै, म यो कुरा पनि सुनिश्चित गर्दछु कि तपाईले कुन आधारमा अपेक्षा राख्नुहुन्छ सेट गर्नुभयो जुन ज्ञान-आधार लेखमा सिक्नुहुन्छ वा खोज्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यस लेख मा, तपाइँ सिक्न जाँदै हुनुहुन्छ तत्वहरू प्रभावकारी ज्ञान-आधार लेखहरू लेख्न आवश्यक छ, ज्ञान-आधार लेख कसरी लेख्ने भन्ने बारे सुझावहरू, र कसरी खोजीको लागि यसलाई अनुकूलित गर्ने।.
लामो लेखहरूका लागि सामग्रीको तालिका थप्नुहोस् - मलाई लाग्दैन कि छोटो लेखहरूको लागि जम्प पोइन्टहरू राख्नु खराब विचार हो त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले आफूले खोजेको जानकारीको सिधा कूद गर्न सक्छन्।
इन्टरलिink्क लेख - गहिरो लेखहरूमा लिंक तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पाठकहरू पछाडि र नेभिगेट गर्न सक्छन्। ब्रेडक्रम्ब यो गर्ने सुन्दर तरीका हो।
चरण निर्देशन द्वारा चरण निर्देशनहरू प्रयोग गर्नुहोस् - तर चरण बोल्ड शीर्षकसँग संक्षिप्त गर्नुहोस् जस्तो कोलिनले उनको इन्फोग्राफिकमा गरे!
हेडिंगको साथ सामग्री तोड्नुहोस् - यी जम्प पोइन्टहरू हुन् जुन तपाईं नम्बर in मा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रयोग कार्यको चित्रण गर्नको लागि उच्च रिजोलुसन छविहरू - छविहरूको श्रृ with्खलाको साथ, एक स्क्रीन क्याप्चर भिडियो वा कसरी गर्ने भिडियो प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंको आगन्तुकहरूले हेर्न सक्छन्।
Asides र जानकारी बाकसको साथ अतिरिक्त जानकारी प्रदान गर्नुहोस् - सुझावहरू, नोटहरू, डाउनलोडहरू, चेतावनीहरू, र अन्य जानकारी तपाईंको पाठकहरूको लागि अलग देखिने बनाउन उत्तम छ।
सम्बन्धित लेखको साथ एक जम्प अफ पोइन्ट दिनुहोस् - ती व्यक्तिहरूका लागि महान मार्ग जुन उनीहरूले साँच्चिकै खोजिरहेका थिए जानकारीमा नेभिगेट गर्नका लागि ... खोजी परिणामहरू सधैं उत्तम हुँदैनन्!
अब कोलिनको लेखलाई हेरोमिस इन्फोग्राफिकमा उनको प्रत्येक सुझावहरूको लागि गहन सल्लाह पढ्न लेख्नुहोस्:
टैग: नायक विषयवस्तुकसरीkbज्ञान आधारअनुकूलनअनुकूलनएसईओ
के तपाइँको वेबसाइट अमेजन जस्तै कुरा गर्दछ?